Representation and Replication | Reef Resilience
Fitsipika 2: Fanehoana sy Famerenana
Ny solontenan'ny karazan-karingan'ny toeram-ponenana an-dranomasina dia miantoka fa ny singa manan-danja amin'ny karazan-javaboary (karazana, vondrom-piarahamonina, ary ireo sehatra ara-batana / ranomasina) dia hisolo tena ao amin'ny tambajotra. Ireo MPA izay ahitana ny fisoloana sy ny famokarana habaka sy vondrom-piarahamonina ao anaty tambajotra mifandray tsara dia mety hijanona sy hijanona ho valin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Rehefa manombana ny fisoloana fisolokoloana ny tambajotra MPA, dia tokony hodinihina ny antony telo ary ampidirina ao amin'ny tambajotra MPA na MPA:
Famokarana biodiversité: ny toeram-ponenana tsirairay dia manohana ny fiaraha-monim-pirenena tokana, ary ny ankamaroan'ny biby an-dranomasina dia mampiasa fonenana mihoatra ny iray mandritra ny androm-piainany
Toetoetry ny biôgrafia, ara-jeografia ary ny tontolo iainana amin'ny fonenana sy ny karazam-biby
Ny fahamarinan-toerana momba ny tontolo iainana: zava-dehibe ny fikojakojana ny tontolo iaianan'ny rafitra toy ny fisehon'ny habaka rehetra
Amin'ny fampisehoana ny toeram-ponenana rehetra, ny manampahefana dia miantoka fa ny fiarovana ny tontolo iainana dia miaro amin'ny karazam-piarovana.
Acropora palmata ara-pahasalamana ao amin'ny tahirin-dranomasina any Kiobà. Sary © Ian Shive
Fisomparana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo famerenana ireo toeram-ponenana
Ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny orinasa hafa dia tsy hisy fiantraikany amin'ny karazam-biby sy ny toeram-ponenana na aiza na aiza; Noho izany, ny paikady hampielezana ny loza dia tsy maintsy hatsangana amin'ny rafitra MPA. Mba hampielezana ny mety hisian'ny karazana habakabaka iray amin'ny hetsika mahavariana na loza voajanahary hafa, ny manampahefana dia tokony hiaro ireo ohatra marobe (replicates) amin'ny faritra marobe an-dranomasina rehetra, ary hanaparitaka azy ireo mba hampihenana ny vintana rehetra hanjavona azy rehetra ny fisavorovoroana toy izany.
Ny replication dia ny fampidirana karazana karazana habaka an-habakabaka ao amin'ny MPA sy ny tambajotra. Ny fametrahana ireo vondrom-piarahamonina voaaro azo antoka sy marefo amin'ny toerana maro dia mampitombo ny mety hitranga amin'ny sasany ka ho tafavoaka velona ary afaka manohana ny fanarenana ireo faritra voakasika. Ny famaritana ny MPA dia afaka manampy ny fanavahana ny karazana an-dranomasina eo anelanelan'ny faritra. Bibilava marobe maro no mifanakalo larvae miaraka amin'ireo mponina manakaiky azy. Ny famaritana ny MPA dia azo atao mba hametrahana ny lozam-pamokarana amin'ny karazana ary hanamora ny fifandraisana eo amin'ireo toerana. Heba Ny fiheverana koa dia hisy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ny anjara andraikitry ny MPA.
Misolo tena ny 20-40% amin'ny toeram-ponenana lehibe tsirairay (izany hoe, ny karazana haran-dranomasina tsirairay, ny ala honko, ary ny ala honko) any amin'ny tahirin-dranomasina, arakaraka ny fanerena ny jono sy raha misy ny fitantanana mahomby amin'ny jono any ivelan'ny tahiry. ref
Ny faritra tsy misy toerana dia tokony hahatratra ny farafaharatsiny 30% amin'ny sehatry ny fitantanana (indrindra any amin'ny faritra misy tsindry mafy amin'ny mpanjono na ny fiantraikan'ny olombelona). Ny latsa-paka (fa tsy latsaky ny 10%) dia azo ampiharina amin'ny faritra misy tsindry fanjono manan-tantara, fa raha tanjona dia ny miaro ny karazan-tsakafo faran'izay kely kokoa na ny faharetan'ny fotoana fananganana (toy ny antsantsa na sasany).
Alaharo ny fiarovana ny toeram-ponenana lehibe indrindra farafaharatsiny farafaharatsiny farafahakeliny telo. ref